Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Libanona » Maizina i Libanona taorian'ny fahatapahan'ny herinaratra tanteraka
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana Libanona • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Jiro lehibe roa no lany solika satria tsy nanana vola vahiny handoavana mpamatsy angovo vahiny ny governemanta. Ireo sambo nitondra solika sy lasantsy dia voalaza fa tsy nety niantsona tany Libanona mandra-pandoa ny fandefasana azy ireo tamin'ny dolara amerikana.
Ny toe-java-misy famatsiana herinaratra dia efa nahatsiravina tany Libanona talohan'ny delestazy tanteraka.
Hiezaka ny hampiasa ny tahirin'ny solika ataon'ny miaramila ny manampahefana mba hahafahan'ireo toby famokarana herinaratra miverina miasa vonjimaika.
Raha ny loharanom-baovao ofisialy avy any an-toerana dia mety haharitra “andro maromaro” ny fahatapahan-jiro any Libanona.
Misedra fahatapahan-jiro goavana i Libanona taorian'ny herin'ny herinaratra roa lehibe indrindra ao amin'ny firenena noterena hikatona androany, noho ny tsy fahampian'ny solika.
Raha ny filazan'ny tompon'andraikitra Libaney dia saika hitohy mandritra ny 'andro vitsivitsy' ny delestazy tanteraka ao amin'ny firenena tratry ny krizy efa ho enina tapitrisa.
Ireo tobin-herinaratra Deir Ammar sy Zahrani voadona dia nanome 40% ny herinaratra any Libanona, araka ny filazan'ny mpandraharaha azy ireo, Electricité Du Liban.
"Nijanona tsy niasa tanteraka tamin'ny mitataovovonana androany ny tambajotran'ny herinaratra Libaney, ary tsy azo inoana fa hiasa hatramin'ny alatsinainy ho avy io, na mandritra ny andro maromaro," hoy ilay tompon'andraikitra.
Hiezaka ny hampiasa ny tahirin'ny solika ataon'ny miaramila ny manampahefana Libaney mba hahafahan'ny toby famokarana herinaratra miasa vonjimaika, saingy mampitandrina izy ireo fa tsy hitranga tsy ho ela izany.
Jiro lehibe roa no lany solika satria tsy nanana vola vahiny handoavana mpamatsy angovo vahiny ny governemanta. Ireo sambo nitondra solika sy gazy dia voalaza fa tsy nety niditra Libanona mandra-pandoa ny fandefasana azy ireo amin'ny dolara amerikana.
Nilentika 90% ny pounds libaney nanomboka ny taona 2019, tao anatin'ny krizy ara-toekarena, izay vao mainka nampitombo ny fahatairana ara-politika. Ny antoko mpifaninana dia tsy afaka nanangana governemanta tao anatin'ny 13 volana hatramin'ny fipoahana mahafaty tao amin'ny seranan'i Beirut, mahita marimaritra iraisana taorian'ny fankatoavan'ny kabinetra vaovao tamin'ny volana septambra.
Ny toe-java-nisy famatsiana herinaratra dia nahery vaika tany amin'ny firenena talohan'ny delestazy tanteraka, izay nahitan'ireo mponina herinaratra nandritra ny adiny roa isan'andro fotsiny.
Ny mponina sasany dia miankina amin'ny mpamokatra gazoala manokana hamelomana ny tranony, saingy tsy ampy ny fitaovana toy izany ao amin'ny firenena.